Neymar Jr Aabihii Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Wiilkiisa, Haddii Uu Barcelona Ku Laabanayo Iyo Haddii Uu Fursad U Helayo Kulanka Man United. - GOOL24.NET
Neymar Jr Aabihii Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Wiilkiisa, Haddii Uu Barcelona Ku Laabanayo Iyo Haddii Uu Fursad U Helayo Kulanka Man United.
Neymar Jr aabihii Neymar Senior ayaa ka hadlay mustaqbalka wiilkiisa iyo waliba xaalada dhaawac ee uu PSG kaga maqan yahay. Xidiga reer Brazil ayaa hadda ku maqan dhaawac canqowga ka soo gaadhay isla markaana uu muddo toban usbuuc ah la maqnaanayo wuxuuna aabaha dhalay Neymar jr cadeeyay in wiilkiisu seegi doono kulanka Man United ee Champions League.
Neymar Jr ayaa hore u seegay kulankii lugtii hore ee Champions league ee ay kooxdiisa PSG guusha muhiimka ah ka soo gaadhay Manchester United laakiin waxa uu markale seegi doonaa kulankii Paris isaga oo garoonka soo fadhiisan doona balse aan heli doonin wax fursad uu ku ciyaaro sida uu xaqiijiyay Neymar Senior oo ah Neymar aabihii.
Dhinaca kale Neymar Senior ayaa cadeeyay in wiilkiisa iyo isaga midkoona ayna telefoon ka helin maamulka kooxda Barcelona wuxuuna sheegay in uu yahay war qalad ah in suuqa looga hadlayay in wiilkiisu uu Barcelona ku laabanayo laakiin Neymar Senior ayaa su’aal furan ka dhigay waxa dhici kara mustaqbalka iyo haddii wiilkiisu uu PSG ka bixi doono.
Neymar jr aabihii oo xaqiijinaya in wiilkiisu aanu wax fursad ah u haysan kulanka lugta labaad ee Champions league ee Man United ayaa yidhi: “Hadda Neymar wuu dhaawacan yahay. Waa wax adag, waxayna qasaysaa kuwa kubbada cagta jecel iyo kuwa jecel in uu isagu ciyaaro. Waxa uu hanaanku ahaa in uu ugu yaraan 10 usbuuc maqnaanayo. Soo labaashada kulanka Man United waa mid aan macquul ahayn”.
Neymar Senior ayaa intaas kadib ka jawaabay wararkii xanta suuqa ee wiilkiisa la xidhiidhinayay kooxaha reer Spain wuxuuna yidhi: “Waxaa jira laba qof oo ka hadla Neymar. Aniga iyo isaga midkaayana waqtina kamuu hadal. Miyuu marnaba qof wax naga maqlay anaga ee suurtogalnimada uu Barcelona ugu laabanayo?”.
Neymar Jr oo mustaqbalka wiilkiisa si buuxda uga hadlaya ayaa yidhi: “Waa wax aan macquul ahayn in ciyaartoy isaga oo kale ah looga tago wararka xanta ah. Ma jiro wax wicitaan ah oo uu Barcelona la yeeshay, waa qalad. Jogitaankiisu waa Paris, mustaqbalkiisu waa Paris. Way adag tahay in mustaqbalka laga hadlo, sababtoo ah waa kubbada cagta, oo waqti kasta ayay is badali kartaa”.